Yabelana ngamava akho nge-AutoCAD kwaye ufumane ikhamera yevidiyo-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Tshela i-AutoCAD yakho yamava uze ufumane ikhamera yevidiyo
Kulungile, i-AutoDesk iya kunika iikhamera kwabo basebenzisi bazimisele ukubabonisa ngebali lendlela i-AutoCAD itshintshe ngayo ubomi babo; Ke ba bhengeze kwiblogi phakathi kwemizila.
Kwaye ungacingi ukuba baya kukunika ikhamera elula, yividiyo yeFlip, ikhamera enamandla enokurekhoda ukuya kwimizuzu engama-60 yevidiyo, kubandakanya imakrofoni eyakhelwe-in nengalo ye-USB, phakathi kwezinye izinto.
Ukuthatha inxaxheba kufuneka uthumele i-imeyile usithi yeyiphi ividiyo ozimisele ukuyenza ... kwaye uchukumise uHurley. I-AutoCAD yenza oku ukukhuthaza umboniso wayo we-podcast, ngelixa ibanceda bafunde ngeendlela ezilungileyo kubasebenzisi babo.
Phakathi kwamabali abalindele ukuba ibe ziiprojekthi zokuyila ozenzileyo kunye ne-AutoCAD kwaye ukuba ukhetha wena, ekuphela kokuzibophelela kukubathumela ividiyo efakwe kwikhamera efanayo abakunika yona.
Ke ukuba ungumsebenzisi we-AutoCAD, ucinga ukuba ibe luncedo kakhulu kwaye unobuchule obaneleyo, kuya kufuneka uthumele i-imeyile ku autocad.video@autodesk.com. Kwi-imeyile kufuneka ubonise ukuba ungubani, wenza ntoni kwaye unethemba lokubandakanya kwividiyo yakho.
Ngaba uyilungele?… Ukuba akunjalo, sasaza igama phakathi kwabahlobo bakho kuba inani leekhamera lilinganiselwe.
I- $ 30 yokubhiyozela usuku lwe-blogger
iikhamera zedijithali ezingabizi uthi:
Umxholo oveliswe kwiphepha lam elitsha leekhamera zedijithali kwaye ndabona eli phepha liye laphefumlela ukuba ndiyenze kakuhle kangakanani. Ndiyakuvuyela